Nahoana no Voalamina Tsara ny Vahoakan’Andriamanitra? | Vaovao Tsara
Avy Amin’iza ny Baiboly?
Inona no Antony Namoronan’Andriamanitra ny Tany?
HAMAKY AMIN'NY TENY Abbey Abkazianina Abui Acholi Adhola Afrikaans Aja Ajië Albaney Alemà Alemà any Pennsylvanie Alur Amharique Anglisy Arabo Arabo (Maroc) Arabo (Tonizia) Armenianina Armenianina (Andrefana) Asamey Ateso Attié Aukan Awajun Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Baliney Bambara Baoulé Basque Bassa (Cameroun) Bassa (Liberia) Batak (Dairi) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Bengali Betsimisaraka Atsimo Betsimisaraka Avaratra Biak Bichlamar Bicol Boligara Bosniaka Boulou Bété Cakchiquel Andrefana Catalan Cebuano Chamorro Changana (Mozambika) Changana (Zimbabwe) Chavacano Chichewa Chin (Hakha) Chin (Kuki) Chin (Tiddim) Chin (Zotung) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chontal (Tabasco) Chopi Chuabo Chuuk Cinamwanga Cinghalais Cinyanja Damara Dangme Danoà Dari Dayak Ahe Dayak Ngaju Digor Diola Douala Drehu Dusun Efik Emberá (Catío) Esan Espaniola Estonianina Failandey Fante Fataluku Fidjianina Fitenim-paritra Alemà Fon Frafra Frantsay Frison Fulfulde (Cameroun) Futuna (Atsinanana) Féroïen Ga Galicienne Galoà Garifuna Gitonga Gokana Goujrati Goun Gourmanchéma Gouro Grika Groenlandey Guarani Guarani (Bolivia) Guerze Guna Guéré Géorgien Haoussa Hawu Haya Hebreo Hehe Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (Fotsy) Holandey Hongroà Huave Huaxtèque (San Luis Potosi) Huichol Hunsrik Iban Ibanag Ibinda Ibo Icibemba Iloko Inakeanon Indonezianina Iokrenianina Irlandey Islandey Isoko Italianina Japoney Javaney Javaney Atsinanana Jula Kabiyè Kabuverdianu Kabyle Kachin Kadazan Kambôdzianina Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kaomaorianina (Ngazidja) Karen (S'gaw) Kazakh Kazakh (Arabo) Kekchi Khana Khasi Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinande Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisii Kisonge Kissi Kongo Konkani (Devanâgarî) Konkani (Romanina) Koreanina Kosrae Kpelle Kreôla Maorisianina Kreôla any Beliza Kreôla any Goadelopy Kreôla any Guinée-Bissau Kreôla any Guyane Kreôla any Haïti Kreôla any La Réunion Kreôla any Seychelles Krio Kroaty Kurde Kurmanji Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Kurde Sorani Kwangali Kwanyama Kyangonde Lahu Lamba Laosianina Latgalian Lenje Letonianina Lhukonzo Lingala Litoanianina Lomwe Lovari Luganda Lugbara Lunda Luo Luvale Luxembourgeois Macua Madi Makasae Makoshi Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mam Mambae (Ermera) Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Mandingue Mandjak Mangareva Maninkakan (Atsinanana) Manipuri Mano Mapudungun Marathe Marquisien (Hiva Oa) Marquisien (Nuku Hiva) Marshall Masedonianina Maya Maya (Mopán) Mayo Mazahua Mazateky (Huautla) Mbukushu Mende Meru Mingrelian Miskito Mixe Mixtèque (Guerrero) Mixtèque (Huajuapan) Mixtèque (Tlaxiaco) Mizo Mongol Mooré Motu Myama Nahuatl (Afovoany) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Puebla Avaratra) Nahuatl (Veracruz) Nama Nambya Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nengone Ngabere Ngangela Ngiemboon Nias Niue Norvezianina Nyaneka Nyungwe Nzema Népali Odia Okpé Oromo Ossète Otetela Otomi (Lohasaha Mezquital) Otomi (Meksika) Ourdou Ouzbek Ouzbek (Romanina) Ouïgour (Sirilika) Paicî Palau Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pemon Pendjabi Pendjabi (Shahmukhi) Persianina Piaroa Pidgin (Afrika Andrefana) Pidgin (Cameroun) Pidgin Nizerianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Pilagá Poloney Poméranien Ponape Portogey Portogey (Portogaly) Pular Páez Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Chibuleo) Quechua (Cuzco) Quechua (Huallaga Huánuco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quichua (Pastaza) Quichua (Santiago del Estero) Quichua (Tena) Quiché Rapa Nui Rarotonga Romanianina Rosianina Roviana Rumanyo Rungus Runyankore Rutoro Rômania (Albania) Rômania (Arzantina) Rômania (Boligaria) Rômania (Gresy Atsimo) Rômania (Gresy Avaratra) Rômania (Macédoine) Rômania (Macédoine) Sirilika Rômania (Romania) Rômania (Serbia) Rômania (Slovakia Atsinanana) Saami (Avaratra) Samoanina Sangir Sango Saramaccan Sarnami Sena Sepedi Sepulana Serba Serba (Soratra Romanina) Serer Sesotho (Afrika Atsimo) Sesotho (Lesotho) Setswana Shipibo-Conibo Shona Shuar Sidama Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Soli Somali Soundanais Sranan Tongo Susu Swahili Swahili (Congo) Swati Sénoufo (Cebaara) Tagalog Tahisianina Tailandey Tajiki Talian Tamoul Tandroy Tankarana Tarahumara Afovoany Tarasque Tatar Tchouvache Tenin’ny Tanana Albaney Tenin’ny Tanana Alemà Tenin’ny Tanana Alemà Soisa Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Angoley Tenin’ny Tanana Aostralianina Tenin’ny Tanana Aotrisianina Tenin’ny Tanana Boligara Tenin’ny Tanana Bolivianina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Britanika Tenin’ny Tanana Espaniola Tenin’ny Tanana Estonianina Tenin’ny Tanana Failandey Tenin’ny Tanana Frantsay Tenin’ny Tanana Grika Tenin’ny Tanana Holandey Tenin’ny Tanana Hongroà Tenin’ny Tanana Indianina Tenin’ny Tanana Indonezianina Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Japoney Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Koreanina Tenin’ny Tanana Kroaty Tenin’ny Tanana Letonianina Tenin’ny Tanana Malagasy Tenin’ny Tanana Malezianina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanana Mongol Tenin’ny Tanana Nikaragoanina Tenin’ny Tanana Orogoayanina Tenin’ny Tanana Panamianina Tenin’ny Tanana Paragoayanina Tenin’ny Tanana Perovianina Tenin’ny Tanana Poloney Tenin’ny Tanana Portogey Tenin’ny Tanana Romanianina Tenin’ny Tanana Rosianina Tenin’ny Tanana Serba Tenin’ny Tanana Silianina Tenin’ny Tanana Sinoa Tenin’ny Tanana Slovaky Tenin’ny Tanana Slovenianina Tenin’ny Tanana Soedoà Tenin’ny Tanana Tailandey Tenin’ny Tanana Tseky Tenin’ny Tanana Venezoelianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Afrika Atsimo Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tenin’ny Tanan’ny avy any Costa Rica Tenin’ny Tanan’ny avy any Cuba Tenin’ny Tanan’ny avy any Ekoatera Tenin’ny Tanan’ny avy any Ghana Tenin’ny Tanan’ny avy any Goatemalà Tenin’ny Tanan’ny avy any Honduras Tenin’ny Tanan’ny avy any Hong-Kong Tenin’ny Tanan’ny avy any Malawi Tenin’ny Tanan’ny avy any Mozambika Tenin’ny Tanan’ny avy any Nouvelle-Zélande Tenin’ny Tanan’ny avy any Philippines Tenin’ny Tanan’ny avy any Québec Tenin’ny Tanan’ny avy any Salvadaoro Tenin’ny Tanan’ny avy any Taïwan Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tlapanèque Toabaite Toba Tojolabal Tok Pisin Tokelauan Tongan Toraja Totonac Toupouri Tseky Tshiluba Tshwa Tsonga Turkmène Tuvalu Twi Tyrewuju Tzotzil Télougou Umbundu Urhobo Uruund Valencienne Venda Vezo Vietnamianina Wallis Warao Waray-Waray Wayuunaiki Wejewa Wichi Wolaita Wolof Xavante Xhosa Xârâcùù Yacouba Yorobà Yukpa Yupik any Alaska Afovoany Zandé Zapoteky (Andilan-tany) Zapoteky (Guevea) Zapoteky (Lachiguiri) Zapoteky (Villa Alta) Zoloa tzeltal Édo Éwé
1. Nahoana ny Israelita fahiny no voalamina tsara?
Nalamin’Andriamanitra ho firenena iray ny taranak’i Abrahama, ary nomeny lalàna. Nantsoiny hoe “Israely” ilay firenena, ary nanankinany ny teniny sy ny fivavahana marina. (Salamo 147:19, 20) Afaka nandray soa koa àry ny firenena rehetra, tatỳ aoriana.—Vakio ny Genesisy 22:18.
Ny Israelita no nofidin’Andriamanitra ho vavolombelony. Hita avy amin’ny tantaran’izy ireo, fa tena mahasoa ny mankatò ny lalàn’Andriamanitra. (Deoteronomia 4:6) Nahafantatra an’ilay tena Andriamanitra ny olon-kafa, rehefa nandinika ny Israelita.—Vakio ny Isaia 43:10, 12.
2. Nahoana koa ny Kristianina no voalamina tsara?
Tsy nankasitrahan’i Jehovah intsony ny Israelita, ka ny fiangonana kristianina no nataony solony. (Matio 21:43; 23:37, 38) Ireo Kristianina indray àry no lasa vavolombelona misolo tena an’i Jehovah.—Vakio ny Asan’ny Apostoly 15:14, 17.
Nalamin’i Jesosy tsara ireo mpanara-dia azy, mba hitory sy hampianatra any amin’ny firenena rehetra. (Matio 10:7, 11; 24:14; 28:19, 20) Efa kely sisa dia ho vita io asa io, satria efa andro farany izao. Olona an-tapitrisany avy amin’ny firenena rehetra izao no miara-manompo an’i Jehovah, ary mbola tsy nisy hoatr’izany mihitsy hatramin’izay! (Apokalypsy 7:9, 10) Voalamina tsara ireo Kristianina marina ireo, ary mifanampy sy mifampahery. Mitovy ny fampianarana ara-baiboly azon’izy ireo rehefa mivory, na aiza na aiza misy azy eran-tany.—Vakio ny Hebreo 10:24, 25.
3. Ahoana no nampisy ny Vavolombelon’i Jehovah ankehitriny?
Taorian’ny 1870 no nanomboka nisy ny Vavolombelon’i Jehovah ankehitriny. Tsy fantatra intsony ny tena fampianaran’ny Baiboly tamin’izany. Nisy olona vitsivitsy anefa niara-nianatra, ary nahita ny marina. Fantany hoe nalamin’i Jesosy ny fiangonana kristianina, mba hamita ny asa fitoriana. Nanomboka nitory àry izy ireo, ary nitatra eran-tany izany. Nandray an’ilay anarana hoe Vavolombelon’i Jehovah izy ireo, tamin’ny 1931.—Vakio ny Asan’ny Apostoly 1:8; 2:1, 4, 11; 5:42.
4. Ahoana no andaminana ny Vavolombelon’i Jehovah?
Efa nisy fiangonana maro tany amin’ny tany samihafa, tamin’ny taonjato voalohany. I Jesosy no Lohan’ny fiangonana, fa nampiasa ny apostoly sy anti-panahy vitsivitsy izy, mba hitarika ny asa. (Asan’ny Apostoly 16:4, 5) Misy anti-panahy vitsivitsy tena mahay koa ankehitriny, mitarika ny asan’ny Vavolombelon’i Jehovah eran-tany. Filan-kevi-pitantanana no iantsoana azy ireo. Mamoaka boky sy gazety ara-baiboly io Filan-kevi-pitantanana io. Adika amin’ny fiteny 600 mahery izy ireny, ary atao pirinty any amin’ireo biraon’ny sampan’ny Vavolombelon’i Jehovah. Ny Filan-kevi-pitantanana avokoa no manara-maso an’izany. Mahazo fampaherezana sy tari-dalana avy ao amin’ny Soratra Masina àry ireo fiangonana 100 000 mahery eran-tany. Isaky ny fiangonana koa dia misy lehilahy matotra atao hoe anti-panahy mikarakara ny ondrin’Andriamanitra.—Vakio ny 1 Petera 5:2, 3.
Voalamina tsara ny Vavolombelon’i Jehovah, mba hitory ny vaovao tsara sy hanao mpianatra. Mitory isan-trano izy ireo, toy ny nataon’ny apostoly. (Asan’ny Apostoly 20:20) Ampianarin’izy ireo Baiboly koa ny olona tso-po. Tsy mpiara-mivavaka fotsiny anefa ny Vavolombelon’i Jehovah, fa toy ny fianakaviana mihitsy, ka i Jehovah no Rainy. Mifankatia izy ireo, ary toy ny mpirahalahy sy mpirahavavy. (2 Tesalonianina 1:3) Tena sambatra izy ireo, satria manao ny sitrapon’i Jehovah sy manampy ny hafa, ary voalamina tsara izay ataony.—Vakio ny Salamo 33:12; Asan’ny Apostoly 20:35.
Ataovy Namanao Foana i Jehovah
Ahoana no hampisehoantsika hoe tia an’Andriamanitra isika sady te hisaotra azy noho izay nataony?